Dagaal uu ku dhaawacmay Taliye Ciidan oo ka dhacay Doolow | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Dagaal uu ku dhaawacmay Taliye Ciidan oo ka dhacay Doolow
Dagaal uu ku dhaawacmay Taliye Ciidan oo ka dhacay Doolow
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya Dagaal u dhexeeyay Ciidamo ka wada tirsan dowladda Federaalka Soomaaliya oo saakay ka dhacay degmada Doolow ee Gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya.
Dagaalkan oo sigaar ah u dhexmaray Ciidanka Nabadsugida iyo kuw Asluubta dowladda ayaa waxaa uu yimid, kadib markii Ciidanka Asluubta ay weerar ku qaadeen Ciidanka Nabadsugida oo xiray Askari kamid ah Asluubta.
Qof kamid ah dadka deegaanka Doolow oo la hadlay Idaacadda Dalsan ayaa sheegay in dagaalka inta uu la socday la maqlayay dhawaqa rasaas xoogan oo labada dhinac ay isdhaafsanayeen, in kastoo xaaladda haatan ay tahay mid degan.
Khasaaro dhaawac ah ayaa lagu wadaa inuu ka dhashay dagaalka, waxaana la xaqijiyay inuu dhaawac soo gaaray Taliyaha nabadsugida Doolow Xasan Cibaad iyo Askari ilaalo u ahaa, kuwaasi oo loo soo qaaday Magaalada Muqdisho.
Weli ma jiro wax war ah oo kasoo baxay Maamulka Doolow ee Gobolka Gedo oo ay uga hadlayaan dagaalkii halkaas ku dhexmaray Ciidamo ka wada tirsan dowladda Federaalka gaar ahaan Ciidanka Nabadsugida iyo kuw Asluubta.
Maqaal horeRa’iisul Wasaare Rooble oo Maanta kusii jeeda Kismaayo iyo ujeedkiisa
Maqaal XigaWafdi ka socda Dowladda Federaalka oo shir uga qeyb galay Qaahira